Ny pejy fandokoana saka lehibe dia misintona sy miloko maimaim-poana
Saka lehibe - boky fandokoana bibidia
Saka lehibe tokana
Ny biby dia iray amin'ireo motera malaza indrindra amin'ny pejy fandokoana ankafizin'ny zaza ary tsy zava-poana fa ny biby fiompy dia hita ao amin'ny tokantrano maro. Antony ampy fa nandinika manokana ny pejin'ny biby izahay. Amin'izao safidy izao, azonao atao ny manantena pejy maro fandokoana saka dia, izay azonao atao pirinty miaraka amin'ny zanakao ary asio loko miaraka amin'ny crayons, penina tendro na crayons savoka.
Pejy fandokoana saka lehibe
Ny môdelinay dia mila atao pirinty amin'ny taratasy mahazatra vao manomboka. Ny fanindriana ny sary dia manokatra ny pejy topy miaraka amin'ireo karazana biby voafantina:
Safidy lehibe isan-karazany amin'ny biby dia manome antoka fa ny ankizy tsirairay dia afaka mahita sy mandoko ny biby tiany. Ny tsindry iray amin'ireto rohy manaraka ireto dia manokatra ny pejy tsirairay avy miaraka amin'ny maodely fandokoana:
Leopard pejy fandokoana - saka be